I-Reolink Argus 3, ikhamera yokujonga ngokufanelekileyo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 28/05/2021 10:00 | ngokubanzi
Inkampani yaseAsia Phinda uqalise Usebenze iminyaka emininzi ngoku kunye neekhamera zokhuseleko lwasekhaya kunye nolunye uhlobo lombono oza engqondweni. Ukukhululwa kwakhe kwangoku akunakuphoswa kwiwebhusayithi yethu, apho sisoloko sikugcina usesikhathini kunye nolwazi malunga nekhaya elixhumeneyo.
Fumanisa nathi onke amandla alo, izibonelelo zayo kwaye kunjalo nangoncedo lwayo. Ungaphoswa luhlalutyo olunzulu ngokweenkcukacha ezinkulu.
3 Phinda uqalise usetyenziso kunye noseto
UReolink uthathe isigqibo sokubheja ekuqhubekeni kwale mveliso. Nangona ineenoveli ezibalulekileyo ngokubhekisele kwiArgus 2 esiyihlalutyo apha, inyani kukuba ifemi inoyilo olubonakalayo kuzo zonke iimveliso zayo. Ngeli xesha sinesixhobo esinendawo ethe tyaba ngaphambili enesambatho esimnyama, ngelixa umva ubumbene kakhulu ngeplastiki emhlophe ecwebezelayo. apho sinokubona khona ilogo yenkampani. Ngasemva, indawo enomazibuthe eya kuthi isincede siyibeke kwinkxaso yayo eyahlukahlukeneyo esiza kuthetha ngayo kamva.
Imilinganiselo: Ubukhulu: 62 x 90 x 115 mm
Iphambili apho zikhona ii-LED, ezinye izinzwa kunye netekhnoloji enikezelwe ekubanjweni komfanekiso. Ngasemva kulapho sinesibuko se-microUSB esisebenzela umbane, isiseko sokufakelwa kunye nesithethi esinolwazi. Sineqhosha "lokusetha kwakhona" kwisiseko kunye neqhosha lokucima / ukucima kunye nezibuko lekhadi le-MicroSD esinokufikelela kulo kwisoftware.
Isundu, njengoko besitshilo, sithathwa yiadaptha enomazibuthe eya kusivumela ukuba sibeke ikhamera kwii-angles ezininzi ngaphandle komzamo omkhulu.
Inzwa ye-Starlight CMOS linoxanduva lokufaka umfanekiso, okwaziyo ukunika isisombululo I-1080p FHD ngenqanaba, ewe, kwi-FPS ze-15 kuphela. Ifomathi yevidiyo erekhodiweyo iya kuba yendalo iphela kwaye iyahambelana, H.264.
Kule meko ikhamera inekona yokujonga eyi-120º kunye nokusetyenziswa kwayo Inkqubo entsonkothileyo yombono ebusuku kumnyama nomhlophe ngokusebenzisa ii-infrared LEDs ezinokubona ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-10, kunye nenkqubo yombono ebusuku ii-LED ezingama-230 ezingama-6500 ezineetoni ezingama-XNUMX K Iya kuthi kwakhona isinike umxholo ukuya kuthi ga kwi-10 yeemitha kude.
Sinezikhululo ezithandathu zokunyusa ngokwedijithali ngokusetyenziswa kwesicelo esisetyenzisiweyo. Kwinxalenye yayo, iye imakrofoni kunye nesithethi eya kusivumela ukuba sibe nesandi kumacala omabini kwaye siyisebenzise njenge-intercom. Ngokwenxalenye yayo, ine "PIR" ehlengahlengisiweyo inkqubo yokubhaqa eshukumayo enoluhlu ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-10 kwi-engile ye-100º.
Inonxibelelwano lweWiFi olusebenzayo kwinethiwekhi ye-2,4 GHz ngokhuseleko lweWPA2-PSK. Kwinqanaba lobuchwephesha kunye ne-Hardware, konke oku kufanelekile ukuba sithethe ngale khamera, izinto ezintsha ngokubhekisele kwimodeli yangaphambili zinqabile, kodwa zanele ukuhlala ziyimveliso enomtsalane. Okokugqibela, le khamera iyahambelana ngokupheleleyo nekhaya elixhumeneyo Umncedisi kaGoogle.
Phinda uqalise usetyenziso kunye noseto
Isicelo seReolink sisebenza kakuhle kwaye sinika ujongano olusebenzayo lomsebenzisi kunye nokusebenza kakuhle kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, ubuncinci kuvavanyo esikwaziyo ukuluqhuba:
Isicelo siya kusivumela ukuba sinxibelelane ngqo nekhamera bukhoma, zombini nge-WiFi nangedatha yeselfowuni. Singayilungisa yonke indawo kunye nokubukela iividiyo ezigcinwe kwimemori khadi. Phakathi kwezinye izinto, ezi zezona zinto zinomdla kwisicelo:
Ngelishwa kuyakufuneka sihambe ngokwalo naluphi na uhlobo lolawulo lwekhamera yevidiyo, Ngaphandle koku, gxininisa uyilo olulungileyo kunye nesoftware elungiselelwe yona.
Le Argus 3 isuka eReolink linyathelo eliya phambili ngokwenza ukuba icamera ihambelane ngakumbi, isinike ithuba lokukhetha iphaneli yelanga eya kuthi igcine isixhobo sihlala sisebenza, nokuba sihlawulisa ibhetri ebandakanyiweyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye into enomdla kakhulu kuluhlu lweemveliso zeReolink ezikhula kancinci kancinci, ungayifumana kwiAmazon ukusuka kwi-126 euro.
Ithunyelwe nge: Meyi 28 ye2021
Akukho seva idibeneyo
Ukunqongophala kweeFPS ezingakumbi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Reolink Argus 3, ikhamera yokujonga ngokufanelekileyo